Ndị na - eweta Apple 100% gbalitere ike ọhụrụ | Esi m mac
Ndị na-eweta Apple 100% gbara mbọ maka mmeghari ohuru
N'ajụjụ ọnụ Lisa Jackson ha si Apple, sma maa ọkwa na ụlọ ọrụ ahụ eruola 96% na mmepụta nke ume ọhụrụ. Nke a na - anọchite anya isi atọ ma e jiri ya tụnyere afọ 2015. Onu ogugu nke mmezu dịgasị dabere na mpaghara ụwa. Na United States, nakwa na mba 23 ndị ọzọ, iji ike ndị a eme ihe bụ 100%. Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ lebara anya n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, na-arịọ ndị na-eweta ya ka ha tinye aka na ntinye nke ume ọhụrụ na ụlọ ọrụ ya niile, yana usoro dị iche iche.
Apple amalitela site na ịrịọ nkwa ahụ: Biel Cristal Fábrica Ltd., Sunwoda Electronic Co., na Compal Electronics Inc. Kedu nke kwuputara iso na-esonye ebumnuche nkwado Apple chọrọ. N'okwu Jackson:
Ugbu a, enwere mmadụ asaa n'usoro ntinye anyị nke ji obi ha niile rụọ ọrụ ha
Apple Solar Ike Ugbo
Apple tinyere aka na ume okike n'okpuru ọchịchị Obama. Onye isi ala ugbu a nwere ike gbanwee ụfọdụ iwu EPA. Agbanyeghị Apple kpebiri ịga n'ihu na mmemme ahụ. Ndị ụlọ ọrụ bịanyere aka na nkwupụta nkwonkwo ahụ mgbe iwu Trump kwuchara.
Anyị kwenyere na ike na-akwusi ike na amụma ihu igwe, dị ka atụmatụ ike dị ọcha, nwere ike ime ka ume ọhụrụ na-enye ume karịa n'agbanyeghị egwu dị egwu nke mgbanwe ihu igwe ma na-akwado asọmpi America, ihe ọhụrụ na mmepe.
Enweghi ike ịkpọ ya n'ọtụtụ oge, n'ime otu ụlọ ọrụ ndị isi n'ụwa niile, dịka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ọcha. Amatala nke a site n’inye onyinye dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ndị na-eweta Apple 100% gbara mbọ maka mmeghari ohuru
MacBook Pro na-enweghị TB, macOS 2 beta 10.12.5, Walt Mossberg chetara, na ndị ọzọ. Kachasị mma izu na SoydeMac
Total War: Warhammer na-abịa App Store na Eprel 18